यी चार राशि भएका मानिसहरुमा हुन्छ यस्तो अचम्मको क्षमता – mero sathi tv
On २६ चैत्र २०७४, सोमबार ०८:०९
ज्योतिषी भाषा मान्ने हो भने तपाई हाम्रो जीवन राशिअनुसार चल्छ । तपाईमाथि गृह, नक्षेत्रको के कस्तो प्रभाव परेको छ, यो कुरा राशिले स्वतः दर्शाउँछ । आधुनिक युगमा जीइरहेकाले हामी ज्योतिषीसँग खासै सरोकार राख्दैनौं ।
तर, सत्य यो पनि हो कि जो समस्या जोतिषीद्वारा हल गरिन्छ, त्यो अन्य उपायबाट समाधान हुन सक्दैन । कुनै पनि व्यक्ति कस्तो होला ? जस्तो देखिन्छ के वास्तवमै त्यो व्यक्ति त्यस्तो होला ? यी सबै सवालको जवाफ पनि हामीलाई ज्योतिषीको माध्यमबाट मिल्न सक्छ । जीवनको गोप्या कुराको खुलासा पनि तपाईको कंडलीले गर्छ ।
श्रीमती हुँदाहुँदै बाहिर सम्बन्ध बनाउने सेलिब्रटीहरु…
७ सय लिएर काठ्माण्डौ छिरेका सिताराम साना दुखले धुर्मुस भएका होईनन्, यस्तो छ उनको संघर्षको कथा